Isifumanisi sokuqesha imoto-imoto yakho ngexabiso eliphambili?
Ngaba ufuna imoto erentisayo? Emva koko ufikelele kwiphepha obukade ulikhangela. Sebenzisa eyethu umntu oqeshisa imoto kwaye ufumane enye ngexabiso elifanelekileyo kunye nazo zonke iziqinisekiso ezinokwenzeka.
Injini yokukhangela imoto yokuqeshisa
Ngaphezulu kwale migca uya kufumana i-injini yethu yokukhangela enamandla eya kukunceda ufumane Elona xabiso libalaseleyo liqinisekisiwe. Ukuyisebenzisa kulula kakhulu, ngenisa ngokulula indawo yokuqokelela, phawula imihla yokuqokelela kunye nokubuya kwaye kuya kufuneka ukhangele kwaye uya kuba nayo eyona nto uyiqeshayo kwimoto yakho.
1 Injini yokukhangela imoto yokuqeshisa
3 Izinto eziluncedo ngokuqasha imoto
4 Qasha imoto kwi-Intanethi
4.1 Iimoto eziqeshisayo
5 I-injini yokukhangela ye-intanethi isebenza njani
6 Ndingayiqasha imoto ngaphandle kwekhadi letyala?
7 Isebenza njani imoto phakathi kwabantu?
Enye yezona nkxalabo zihlala zivela xa sicwangcisa uhambo lwethu, ngakumbi ukuba zikwinqanaba elikhulu, yinto emasiyenze xa sinesidingo kufuneka wenze iindlela zobunzima obuthile okanye uhambo oluya kwezinye iidolophu.
Uninzi lubalekela ukusetyenziswa kwezithuthi zikawonkewonke, nokuba kungenxa yokungabikho kwentuthuzelo kunye nenkululeko ngokweeshedyuli, njl. oku kuthetha ukuba, okanye kungenxa yokonyuka abakuvelisayo kwiindleko zizonke okanye kuhlahlo-lwabiwo mali. Nangona kunjalo, ukuhamba nesithuthi sethu akusoloko kusenzeka, kulapho umbono we iimoto eziqeshisayo.
Kusenokwenzeka ukuba ekuqaleni, ukuqasha imoto ngumsebenzi onzima, kodwa akukho nto inyanisekileyo. Emva koko, sichaza kwaye sikuncede ukuba wenze njani. Kwaye ukuba ufuna ukufumana elona xabiso lincinci kufuneka ucofe apha.
Izinto eziluncedo ngokuqasha imoto
Ukuthatha isigqibo sokucela imoto eqeshisayo kuhambo lwakho kunokuba neenzuzo ezinkulu:
Inkululeko Iishedyuli zokuhamba nokuhamba.
Cwangcisa iindlela kuxhomekeke kwiimfuno zakho.
UkulondolozaKuba ukuqesha imoto, ukuba ayisiyiyo imoto ephezulu, inokuba nexabiso eliphakathi kwe- € 5 kunye ne- € 15 ngosuku. Nangona kunjalo, ukuba sikhethe izithuthi zikawonkewonke, le mali ingangaphezulu kakhulu.
Ukubanakho ukuphatha i isixa esikhulu semithwalo.
Qasha imoto kwi-Intanethi
Okwangoku, kwinethiwekhi sifumana uluhlu olubanzi lweenkampani ezinikezelwe ekuqeshweni kwezithuthi ezisinika ithuba lokucela iinkonzo zazo ngokupheleleyo online. Kodwa le nto ayipheleli apha, kodwa sinenye inketho enje ngamaphepha ewebhu ahlukeneyo asinika iinjini zokukhangela ezilandelela phakathi kwee-franchise ezahlukileyo ezinikezelwe kweli candelo ukuze zisibonise Amaxabiso aphezulu.
Phakathi kwezona zibalaseleyo, sinokuthi:
IiRentalCars liqonga elikuvumela ukuba uthelekise bonke ababoneleli beenkonzo zokuqeshisa iimoto ukufumana elona xabiso liphantsi. Ukuyisebenzisa kulula kakhulu, nje kufuneka ucofe apha, Gcwalisa yonke idatha kwaye ngoku unokugcina imoto eqeshisayo ngexabiso elifanelekileyo.
Uhlahlo-lwabiwo mali lusekwe eCalifornia, ngakumbi kwisixeko saseLos Angeles, ngo-1958. Yaqala njengeshishini losapho oluncinci elinemoto ezili-10 kuphela eziqeshisayo.
Namhlanje, inoluhlu olubanzi lweemoto, iilori kunye neeveni, ukongeza kwisimbuku se Iiofisi ezingama-3.400 ezikumazwe ali-128.
Inkampani ekhethekileyo ukuqesha imoto eYurophu Ngaphezulu kweminyaka engama-60 yamava kwaye uthenjwe ngabathengi abangaphezu kwezigidi ezithandathu ngo-2014. Unokulufumana unikezelo lwabo ngokungena kule khonkco.
I-Six.es yinkonzo ekwi-Intanethi enikezela ngokuqeshisa iimoto kulo lonke elaseSpain nakwamanye amazwe angaphezu kwe-105 kwihlabathi liphela. Kwaye ngoku Ungabhukisha ngesaphulelo se-10% Enkosi kwi- AbsolutViajes ucofa apha. Ngaba uza kuliphosa ithuba?
Kule mihla, apho iiapps ziye zaba sisixhobo esibalulekileyo sokwenza ubomi bethu "bube lula", kuvela iKAYAK, injongo yayo kukusinika isandla xa sicwangcisa uhambo lwethu olufanelekileyo. ngokuthelekisa amaxabiso aphezulu phakathi kwamaphepha ewebhu ahlukeneyo. Kwaye, ewe, ikwasinika nethuba lokufumana imoto eqeshisayo efanele iimfuno zethu.
Umntu ngamnye unezinto azithandayo, yiyo loo nto i-Avis isinika i- izithuthi ezininzi Zonke iintlobo: ukusuka kwiimoto ezilula ukuya kwezinamandla kunye nobunewunewu. Ikwasinika rhoqo izaphulelo ezahlukeneyo rhoqo. Inketho yokuhlala uyikhumbula, nayo Ngoku unesibonelelo seentsuku ezi-3 ngexabiso le-2 ngokunqakraza apha.
I-injini yokukhangela ye-intanethi isebenza njani
Nokuba sijonge kwinjini yokukhangela ethelekisa amaxabiso phakathi kweenkampani ezahlukeneyo zokuqeshisa imoto okanye ukuba iyinjini yokukhangela kwinkampani ethile, ukusebenza kuhlala kufana.
Kuzo sikho Siza kubonisa isikrini esineebhokisi ezahlukeneyo kunye nokhetho ekufuneka silugcwalisile. Okokuqala, kufuneka sibonise indawo apho sinomdla wokuthatha khona isithuthi. Emva kwexesha, siza kubonisa imihla yokuqokelelwa kunye nokuhanjiswa okufanayo. Okokugqibela, kufuneka sichaze udidi kunye neempawu zesithuthi.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ngokuxhomekeke kwinjini yokukhangela esetyenzisiweyo, sinyanzelekile ukuba sinikeze ezinye iintlobo zolwazi. Nangona kunjalo, ezi mfuno zikhankanywe apha ngasentla zezo zibonakala njengomthetho ngokubanzi kwiifom zokukhangela, kwaye amandla esiqhelo ahlala njengoko kuchaziwe.
Ndingayiqasha imoto ngaphandle kwekhadi letyala?
Uninzi lweenkampani ziyathandabuza ukuvumela ukuqeshiswa kwesithuthi ngokusebenzisa intlawulo yemali, kodwa funa kwikhadi le khredithi ngayo. Ke ngoko kunokuba yinto engenakwenzeka ukufumana imoto yokuqasha ngaphandle kolu hlobo lomsebenzi.
Isizathu sokwala imali esesandleni silula kakhulu. Iimoto ziyabiza, kunzima ukuzigcina kwaye, ngakumbi, zinokulungiswa kwezinye iimeko kunokuba kubiza kakhulu. Yiyo loo nto iinkampani kufuneka ziqinisekise ukuba iimoto azizukufumana monakalo kubangelwa ngabathengi, kwaye ukuba oku akuzalisekiswa, kufuneka bazame ukuzinciphisa azizukuvelisa ilahleko kwezoqoqosho. Ngale ndlela, bayila inshorensi eqhotyoshelweyo kwirente yezithuthi.
Ezi inshurensi zigcinwa kwidiphozithi ngohlobo lwemali oluya kubonelelwa kuphela ngumthengi kwimeko apho kufuneka khona (ukonakala koomatshini, ukwaphuka, ukubethwa, njl. Njl.). Ngamakhadi etyala kulula ukwenza olu hlobo lwedipozithi, "ukuvimba" isixa esithile semali esele ikhona eya kuthi "ikhutshwe" xa kuziswa imoto.
Nangona, njengoko yonke into ikhula kobu bomi, le meko ibingazukuba ncinane. Sele kwizixeko ezikhulu kukho iinkampani ezikulungeleyo ukurenta izithuthi zazo kuthi ngentlawulo yemali. Ukuhamba nge-intanethi kunzima ngakumbi, kodwa sele kukho iimeko ezithile ezinje nge-AutoEurope.
Isebenza njani imoto phakathi kwabantu?
Kumaxesha akutshanje, ukuqeshisa imoto kuye kwakho inguquko. Ngakumbi nangakumbi ziinkampani ezinganikeli ngezithuthi zazo, kodwa zisebenza ngabantu. Oko kukuthi, ngabantu abanomdla wokwenza ishishini okanye ukwenza inzuzo ethile ngubani banikela ngeemoto zabo ukuzenza zifumaneke kubasebenzisi.
Abanini bakhetha ixabiso kunye nokufumaneka, kwaye emva kokufumana isicelo sokurenta, bakhetha leyo babona ilunge kakhulu ngokusekwe kwimidla yabo. Emva kwexesha bayakuqinisekisa kwaye bathumele idilesi kunye nemiyalelo yokuthatha isithuthi kumqeshi.
Imoto ihlala kufuneka ibuyiswe ne itanki igcwele ngokupheleleyo ngamafutha (njengokuba yayinjalo ngexesha lonikezelo), kwaye bekunye, umnini kunye nomqeshi, jonga imeko yesithuthi ukuqinisekisa ukuba akukho monakalo ufumanekayo.
Inyathelo elidityaniswa ngabantu abaninzi nangakumbi abafuna ukufumana imali eyongezelelweyo.
Ukuthatha isigqibo sokuqasha imoto okanye naluphi na uhlobo lwesithuthi ngexesha lohambo lwethu kunokhetho olunzulu lokuba sisigqibo esingasayi kuzisola ngaso.
Ekuqaleni, sakuba sigqibile ukuyenza, sinokuba nemibuzo eliwaka kunye nokuthandabuza okuthile ezingqondweni zethu. Nangona kunjalo, xa sele sifunde konke oku kungentla, sinethemba lokuba yonke le mibuzo iphendulwe kwaye namathandabuzo aphelisiwe.